သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတ – Page3– Khit Lunge
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေး (၂၄) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဂျပုမများဖြစ်နေ
Posted on November 29, 2019 November 29, 2019 by KL
မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ အပျိုဖော်ဝင် အရွယ် မိန်းကလေးများ၏ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် ပုညှက်နေကြောင်း မကြာမီက ထုတ်ပြန်ထားသော အာဟာရစစ်တမ်းတစ်ခုက ဖော်ပြသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လူသုံးသောင်း ကျော်ကို ကောက်ယူပြီး ထုတ်ပြန်ထားသော အဆိုပါ အာဟာရစစ်တမ်းတွင် အသက် (၁၀) နှစ်မှ(၁၄)နှစ် အရွယ်မိန်းကလေးများတွင် ပုညှက်နှုန်း ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိကာ ငယ်ရွယ်စဉ်က အာဟာရပြည့်ဝစွာ မစားသုံးခြင်းနှင့်…
ဆေးလိပ်သောက်ရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မယ်၊ အထူးသဖြင့် အဆုတ်ကျန်းမာရေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်စေမယ်ဆိုတာကိုတော့ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်လည်း သိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မကောင်းမှန်းသိလျက်နဲ့ကို မဖြတ်နိုင်ကြတာပါ။ မရှောင်နိုင်ရင်၊ မကာကွယ်နိုင်ရင်တော့ ကုသရပါမယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်တို့ အနေနဲ့ စားရင်းသောက်ရင်းနဲ့ပဲ အဆုတ်ကို ပြန်လည်သန့်စင် ကုသလို့ ရပါတယ်။ အဆုတ်ကို သန့်စင်ပေးတဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးလှတဲ့ စူပါအစားအစာ ၅ မျိုးကို ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်နော်. . . ကြက်သွန်…
ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ လိမ်သူတွေ နဲ့ ဆဲသူတွေ ဘာဖြစ်မလဲ (ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး တရား ကောက်နှုတ်ချက်)
လူတစ်ယောက်ဟာ ဖေ့ဘုတ် ထဲမှာ ရေးပြီးတော့ လိမ်တယ်။ မဟုတ်တာတွေကို လိမ်ပြီး ဖေ့ဘုတ် ကနေ ရေးမယ်ပေါ့။ “မုသာဝါဒမဖြစ်ဘူးလား”လို့ မေးရင် “ဖြစ်တယ်”။ အဲ့ဒီမုသာဝါဒကို ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် “ကာယဒွါရ၀စီကံ”လို့ ခေါ်တယ်။ ဒွါရဆိုတာ ဖော်ဆောင်တဲ့ အရာ။ ပါးစပ်ကပြောတာ မဟုတ်ပေမယ့်လို့ လက်နဲ့ရေးပြီး လိမ်တာလည်း မုသာဝါဒပဲ။ ဖေ့ဘုတ် ထဲက ဆဲတယ်။ ဖရုသ၀ါစာ မဖြစ်ဘူးလား။ ဖြစ်တယ်။ ဆဲတာဟာ…
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့်မဲလာတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်နည်းလမ်းများ
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို လုံးဝ အကျိုးမပြုဘူးဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ အဆုတ်ကိုထိခိုက်မယ် နှလုံးသွေးကြောကိုထိခိုက်မယ် ။ စတဲ့ ကြီးကြီးမားမားတွေ အပြင် ကိုယ်ကနေ ဆေးလိပ်နံ့ထွက်တာ၊ ဆေးလိပ်ကြောင့်ခံတွင်းနံတာတွေ ပါဖြစ်စေတတ်ပါသေးတယ်။ အဲဒီ အထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးနဲ့ ရုပ်အဆိုးကတော့ ဆေးလိပ်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းမဲတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်ကြောင့် မဲနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းကို သဘာဝအတိုင်း ဘယ်လိုသက်သာအောင် လုပ်ရမလဲ ။ ပျားရည် နှင့် သံပရာသီး…
ညဥ့်ငှက်မ၊ အက,မယ်၊လက်ဝှေ့သမား၊ဂျလေဘီ … ဘ၀တွေ စုံလင်လှတဲ့ ဘန်ကောက်ညချမ်းများ
Posted on November 28, 2019 November 28, 2019 by KL
ဘန်ကောက်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ မြန်မာပြည်က လူချမ်းသာတွေ နေ့ချင်းပြန် ဈေးသွားဝယ်တဲ့မြို့ကြီးလို့ ပြေးမြင်မိကြပါလိမ့် မယ်။ ဘန်ကောက်ဟာ အာရှမြို့ကြီးတွေထဲမှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်မှုတွေနဲ့အတူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအများဆုံး မြို့တွေထဲက တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကတော့ ဘန်ကောက်မြို့နဲ့ ထပ်တူ အချိုးမကျခဲ့ပါဘူး။ ဘန်ကောက်မှာ ဘ၀တွေ စုံလင်လှပါတယ်။ ငွေရှိလျှင် ဘာမဆို ၀ယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ဒီမြို့ကြီးမှာ ငွေရလျှင် ဘာမဆို လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ လူတွေလည်း တစ်ပုံကြီးပါ။ နောက်ပြီး…
လတ်တလော ခေတ်စားနေတဲ့လိမ်နည်း တစ်မျိုးပါ….
Posted on November 27, 2019 November 27, 2019 by KL
လိမ်နည်း တစ်မျိုးပါ….. ဟဲလို….လူကြီးမင်း ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က ကံစမ်းမဲပေါက်ပါတယ်…. ကံ​ကောင်းတာမဟုတ်ပါ သင်ကံဆိုးတာပါ….. ရိုးသားတဲ့ တောသူတောင်သားတွေ ကံစမ်းမဲပေါက်ရင် ကံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ မိမိချွေးနည်းစာတွေ ကုန်မှန်းမသိ အလိမ်ခံရမှန်းမသိ ကုန်ခဲ့ကြရတယ်…. ကံစမ်းမဲပေါက်တာ ကံထူးလို့မဟုတ်ပဲ….ကံဆိုးလို့ ပေါက်တာ အလိမ်ခံရဖို့ပဲလို မှတ်ပါ…. ခု လိမ်နည်းက တယ်လီဖုန်း ကုမ္မဏီက ကံစမ်းမဲပေါက်ပါတယ်… ဆွဲကြိုးတစ်ကုံး ဟန်းချိန်းတစ်ခု လက်စွပ်တစ်ကွင်း နားဆွဲတစ်ရံ ဆွဲပြားတစ်ခု ပေါက်ပါတယ်ဆိုပြီး…
မြန်မာပြည်က မိဘတိုင်း ဒီလို စိတ်ဓာတ်မျိုး ရှိသင့်တယ်
ကျမက သားကို အောင်စာရင်းထွက်ပြီးတာနဲ့ တစ်လပဲ နားခိုင်းပြီး သူငယ်ချင်းဆိုင်မှာကူလုပ်ဖို့ ပို့ထားလိုက်တယ် ။သူငယ်ချင်းက မေးရှာတယ် ဖြစ်ပါ့မလား လုပ်နိုင်ပါ့မလား ကလေးက အခုမှ စာသင်ခန်းထဲက ထွက်တာ အိမ်မှာလည်း ဘာမှလုပ်ဖူးတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့ အေး အဲ့တာကြောင့် မင်းဆီပို့တာပေါ့ အိမ်မှာလည်း ဘာမှ မလုပ်ဖူးဘူး ။ သူ ဘာမှလည်း မသိဘူး မတတ်ဘူး အခုမှ သူ အားလုံးသင်ယူရမှာ…
ကိုယ်နဲ့ လက်မထပ်ရသေးပဲ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ ကိုယ့်ချစ်သူပုံနဲ့နှစ်ယောက် တွဲတင်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးရလဒ်
အသိ-သတိ ရှိပါ -ညီမငယ်(သို့) မနမ်းထိုက်တဲ့ ပန်းတစ်ပွင့် ကိုယ်နဲ့ လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့ facebook ပေါ်မှာကိုယ့်ချစ်သူ ပုံနဲ့နှစ်ယောက် တွဲတင်ခြင်းက ဓါးသွားထက်မှာ လမ်းလျှောက်နေရတာနဲ့ အတူတူပါပဲ~ညီမငယ်~ တစ်ကယ်လို့သာ ကံကြမ္မာက လှည့်စားသွားခဲ့ရင်ပထမဦးဆုးံ ထိရှခံစားရမှာက ဘယ်သူလို့ထင်လဲကိုယ့်နှလုးံသား မဟုတ်သလို မာနနဲ့ သိက္ခာတွေပါ -ညီမငယ်~ နှလုးံသားတွေ နာမကျန်းဖြစ်စေတာက တိတ်တဆိတ်လေးငိုကြွေးလို့ရတယ် ….ဂုဏ်သိက္ခာတွေ နာမကျန်းဖြစ်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တံတွေးခွက်မှာ ပက်လက်မျောနေရမှာ ညီမငယ်မိသားစုပါ…
ကိုယ်တွေ့ပျောက်ကင်းသူရဲ့ ပြောပြချက်အရ ကွမ်းစားတတ်သူများ ကျောက်ကပ်ဆေးချင်ရင်
ကွမ်းယာစားသူရော ကွမ်းဟာမစားသူတွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဆေးနည်းလေး ပြန်လည်မျှဝေပါရစေ….. ကိုယ်တွေ့ပျောက်ကင်းသူရဲ့ ပြောပြချက်အရ ဆေးနည်းကကောင်းတယ်။ ဆေးအနေနဲ့က လွယ်ကူတယ်။စစ်ကိုင်းမြို့ ရွာထောင်မီးရထားရပ်ကွက်က ကိုစိုးပိုင်ဆံသ ဆိုရင် မသိသူ နည်းပါးပါမယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဗမာဆေးကို တစိုက်မတ်မတ် ဖော်စပ်နေသူတစ်ဦးပါ။ ဆေးဝါးကုသတာ ဝါသနာထုံသူမို့ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်သူ ကိုကျော်သူရဲ့ကိုယ်တွေ့ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းမှ ခံစားခံရတဲ့ဒုက္ခကနေ သက်သာခဲ့တဲ့ဆေးနည်းလေး လာရောက်မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ ခံတက်ခေါက်နှင့် ဗမာသံပုရာသီးအစစ် ကို အရည်ညှစ်ပြီး စတီးဇွန်း…
အိမ်ထောင်သည် အအိုတွေ အပျိုလေးတွေလို ပြန်ဖြစ်ဖို့ စိတ်ချရတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး
မိန်းမကိုယ် ပြန်လည်ကျဉ်းစေဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေ မသုံးချင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မမတွေ ရှိပါတယ်။ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို ကြောက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဈေးကြီးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆေးတွေ မသုံဘူးဆိုရင် လွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်လို့ရပြီး စိတ်ချရတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေး ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ မိန်းမကိုယ်ရဲ့ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ ကြွက်သားတွေ လျော့ရဲတာကို ပြန်လည်တင်းရင်စေပြီး ပြန်လည်ကျဉ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဆီးဖြူသီးကိုတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ….. ဆီးဖြူသီးဟာ မိန်းမကိုယ်အတွက် ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ သိတဲ့သူ…